Daawo: Shaqaale ajaanib ah oo u gafay diinta islaamka ayaa laga masaafuriyay magaalada…. – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Shaqaale ajaanib ah oo u gafay diinta islaamka ayaa laga masaafuriyay magaalada….
by Tifaftiraha K24 1st March 2017 034
Somaliland ayaa masaafurisay laba sarkaal oo ka tirsan hay’adaha DRC iyo DDG ee arrimaha gargaarka u qaabilsan dalka Denmark, ka dib markii ay ku kaceen falal la sheegay inay lid ku tahay diinta Islaamka.
Wasiirka Qorshaynta Maxamed Ibraahim (Qabo) ayaa warbaahinta u sheegay in labada mas’uul ee la masaafuriyay mid ka mid ahi uu qof shaqaalaha ka mid ah ka horjoogsaday inuu tukado, halka ka kalena uu wax ka sheegay aadaanka masaajidyada.
Wasiirku wuxuu intaa ku daray in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in goobta shaqada ee hay’adahaasi aanay ka jirin wax diinta wax u dhimaya, balse labadan qof ay ahaayeen kuwo iskood u sameeyay falkan.
Dhinaca kalana, inkastoo aanay arrintan ka hadal hay’adahani, haddana wasiirku wuxuu sheegay inay labada hay’adood arrintan kala shaqeeyeen xukuumadda, isla markaana ay shaqada ka joojiyeen labada qof.
DEG DEG: Dab xoogan oo goordhaw ka kacay goob ganacsi oo ku taala Isgooyska…..
Daawo: Ahlu-sunna oo war lama filaan ah ka soo saartay asixinta Ra’isul wasaaraha cusub ee soomalia
Sawirro: Guddoomiye Eng. Yarisow ayaa dhagax dhigay xarunta degmada Wadajir oo ku Bur burtay Qarax horay uga dhacay
Dhageyso:- Maamulka G/Banaadir Oo Bilaabay Qorshe lagu nadiifinayo Wadooyinka Roobku saameeyay
Wadada dhexmarta Suuqa bakaraaha oo laami la saarayo